अश्लील लत कहिले सुरु हुन्छ? - इनाम पुरस्कार
अश्लील लतबारे स्पष्ट प्रश्न सोधेर गैरी विल्सनले: "कति धेरै छ?" मा yourbrainonporn.com वेबसाइट। उनले टिप्पणी गरे कि यो प्रश्नले अश्लीलको असर बाइनरी हुन्। यही छ, तपाईंसँग कुनै समस्या छैन, वा तपाइँ अश्लील पोष्ट हुनुहुन्छ। यद्यपि, पोर्न-प्रेरित दिमाग परिवर्तनहरू स्पेक्ट्रममा हुन्छन्। तिनीहरू केवल कालो र सेतो रूपमा वर्गीकृत गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू केवल या त / वा होइनन्। जसलाई रेखाले पार गर्दछ भने न्यूरेप्लास्टिकको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्छ। मस्तिष्क सधैं सिक्न, परिवर्तन र अनुकूलन वातावरणको प्रतिक्रियामा छ।
अध्ययनले देखाएको छ कि एक सानो मात्रामा प्रायः प्रायः उत्तेजनाले मस्तिष्कलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सक्छ र व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छ।
उदाहरणको लागि, यसले केवल5दिन मात्र लिईयो चिन्हित संवेदनशीलता उत्पन्न गर्नुहोस् स्वस्थ युवा वयस्कों मा भिडियो खेलहरु लाई। Gamers नशे कोइराला थिएन, तर मस्तिष्क क्रियाकलापलाई उनीहरूको विषयगत cravings संग खेल्न गठित। अर्कोमा परिक्षण, लगभग "सबै क्याटहरू" असामान्य पहुँच प्रदान गर्दछ जुन "कैफेटेरिया खाना" मा मोटापेसीको बिरोध हुन्छ। गेट्स डोपामिन रिसेप्टरहरु को लागी रद्दी भोजन मा केवल केहि दिन लागे। यसले खानबाट उनीहरूको सन्तुष्टि घट्यो। कम सन्तुष्टिले चूहों लाई अझ बढी बिरुद्ध बनायो।
इन्टरनेट पोर्नको लागी, यो जर्मन अध्ययन प्रतिष्ठित मैक्स प्लक इन्स्टीट्यूटबाट पुरुषहरूलाई हेर्ने जुन अश्लीलको मध्यम प्रयोगकर्ताहरू थिए। यसले गम्भीर लत सम्बन्धित मस्तिष्क परिवर्तनहरू फेला पारे। उनीहरूले थप पोषण गरे, कम कार्यात्मक कनेक्टिविटी त्यहाँ दिमागको सोच र भावनात्मक भागहरू बीच थियो। एकै समयमा अश्लील पनि कम मस्तिष्क सक्रियता थियो, उनीहरूले थप अश्लील पोषण गरे। यो desensitisitis को एक क्लासिक संकेत जब एक व्यक्ति को उत्तेजना को निश्चित स्तर मा प्रयोग गरिन्छ। समयको बेला उनीहरूलाई बढ्दो चौंकानेदार वा गोठालो सामग्री चाहिन्छ।
An इटालियन अध्ययन पाया कि उच्च विद्यालय वरिष्ठहरु को 16% जसले सप्ताह मा एक पल्ट भन्दा अधिक अश्लील उपभोग गरेको छ असामान्य रूप देखि कम यौन इच्छा को अनुभव। कि तुलनात्मक यौन इच्छा रिपोर्ट गर्न गैर-अश्लील प्रयोगकर्ताहरूको 0% तुलना गर्नुहोस्।
लत बिना समस्याहरू
लिनु भनेको त्यो लतलाई महत्त्वपूर्ण दिमाग परिवर्तन वा नकारात्मक प्रभावको लागि आवश्यक पर्दैन।
बस राख्नुहोस्, यौन क्यान्सर, संवेदनशीलता, desensitisation र अन्य लत सम्बन्धित दिमाग परिवर्तन, एक स्पेक्ट्रम मा हुन्छ। यो पनि थाहा छ कि हाम्रो मस्तिष्क लगातार सिक्न र वातावरण अनुकूलन गर्दैछ। इन्टरनेट अश्लील एक असाधारण स्टिमुलस हो। यो तपाईंको जन्मजात यौन सर्किट, आकृतिहरू दिमाग र अलौकिक धारणालाई लक्षित गर्दछ।
यदि तपाईं पोर्न प्रयोग र सामाजिक चिन्ता बीच लिङ्कहरूमा अनुसन्धान अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, क्लिक गर्नुहोस् यहाँ। यसले तपाईंलाई बाह्य साइटमा लिन्छ र नयाँ विन्डोमा खोल्छ।